Ngenye imini umthendeleko womculo odlawayo "Ingoma Yonyaka" yenzeke. Ngelo xesha umthendeleko waba ngumhla wokukhumbula, umhla wama-45. Esi siganeko sasiqhutyelwe kuphela kwi-capital yaseRussia, kodwa nakwiMinsk. Insimbi eyinhloko uLera Kudryavtseva noSergei Lazarev.
Nangona ukuba iDudryavtseva kunye neLazarev bahlukana iminyaka emininzi edlulileyo, basoloko beyodwa yeembini eziqhakazileyo phakathi kwezikhokelo. ULera noSergei abagcinanga kuphela ubudlelwane bokusebenza, kodwa banobungane. Kwi-instagramah, bobabini abaculi basayinwe kunye kwaye bavame ukwenza iirekhodi ze-repost.
Abathandekayo abaninzi bahlala behlala kunye neendaba zakamuva ze "zangaphambili". Iinkokeli zivame kwi-microblogging yazo zidlala inkohliso, kwaye kwinqanaba bavame ukuzivumela ukuba bathabathe umlingane.
Lera Kudryavtseva akazange amxolele uSergei Lazarev?
Ngexesha lomthendeleko "Ingoma yonyaka ka-2016, iminyaka engama-45" ngokokuqala ngqa uLera Kudryavtseva wabonakala kwisiteji kungekhona njengombukeli, kodwa njengomculi. Kwenzeke ngokukhawuleza, kwaye yavusa intetho ngumhlobo uSergei Lazarev.
Ngokungeniswa kweso sithandwa, uLera Kudryavtseva wahlabelela ingoma ethi "I-Roses Million Crimson". ULazarev ngokwakhe wahlabelela ukukhokela, waza wambesa "umculi ohluphekileyo" owaphosa iinyawo zakhe ezinqabileyo. Ividiyo yale mzuzwana uLera uthunyelwe kwi-microblogging yakhe, esongela umngane ukuba angamxoleli:
I-scam ngokuqinisekileyo isele;))) Ewe, ndiyathanda ukucula ngokukodwa kwaye ngokukhethekileyo kuphela kwisitya okanye nge karaoke, ndiyakwazi ukumemeza, kodwa damn @lazarevsergey andiyi kubaxolela abo
Ababhalisile I-Instragram uLera Kudryavtseva babenelisekile ngokusebenza kwengoma ekhokelayo. Kwimibono abalandeli bayishiya amancomo amaninzi kwaye bacebisa ukuba benze i-duet no-Sergei Lazarev:
olga_uskreeva Ndifuna ukubhala i-duet
alla_pg Lera, unesitampu esihle! Vumani !!
eleonoradobychina Wow, Lera, uhlabelele kakhulu! Ngaba unomculo kunye neLazarev duet?
olga_b555 Kuyinto enhle ukubukela. yinto nje uthando ... vumela nobungane))
585elena Njalo, ukhangeleka kunye!) 😍😍😍
USergei Lazarev wahlabelela nabantwana abaninzi, ividiyo
"Umnqweno ocacileyo": abadlali kunye neendima, ifoto
UKatya Gordon waqala ukuzala ngexesha lokuhamba kwakhe, ividiyo
UDima Bilan wathintela intsapho yakhe
I-Grigory Leps yavula ivenkile yokuqala ye-intanethi
Ukuhlinzwa okungaphumelelanga kweplastiki yaseYulia Nastova ibele kwaholela ekubeni iingxaki ezinzulu, ifoto
Iileta ezinobunzima kunye nezichukumisayo eziseSanta Claus kubantwana
UTim Roth: I-Biography
Iingxaki zesikhumba emva kokuncipha
Ungasusa njani amanqatha ezinqeni zakho ngokuzivocavoca?
Kunokuba uphathe umhlaza wengqondo?
I-cocktail ngebhokisi ye-peanut, i-ts'oleta kunye nebhanana
Usapho lwabafundi - lungile okanye lubi?
Ukukhulelwa komntwana kwiintsuku zokuqala
Umculi uAlexander Malinin, i-biography
"Iminwe" yengulube nebhekoni kunye nemifino
Iindlela eziphambili ezi-3 ezibonakalisiweyo zokumisa "emanzi"